" ချစ်ရတဲ့ညီမငယ်လေးအတွက် ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိပြီးဆင်ခြင်လိုက်နာရမယ့် အသိတရားတွေကို ပြောပြသင်ကြားခဲ့တဲ့ ဘီလီလမင်းအေး'' - Cele Gabar
By KoePosted on May 18, 2022
ချစ်ရတဲ့ညီမလေးရေ Billy Su Than Tharညီမလေးအတွက် မဖူးစာရေးလိုက်ပါတယ်။
၁. အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိပါ။
၂. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးထားပါ။
၃. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်ပါ။
၄. ဘာနဲ့မှဘာအကြောင်းနဲ့မှ ဘယ်သူနဲ့မှမနှိုင်းယှဥ်ပါနဲ့။
၆. ကိုယ့်Style နဲ့ကိုယ်နေပါ။
၁၁. မကောင်းတာတွေချည်းပြောတတ်တဲ့ Negative သမားတွေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက်ဝေးဝေးနေပါနော်။
ချစ်တဲ့ ❤️မဖူး”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သူမညီမလေးကို သွန်သင်တဲ့စာလေးကို တင်လာခဲ့တာပါ။
အမြဲချစ်ရတဲ့ညီမလေးနဲ့ ပုံလေးတွေအမြဲတင်တတ်တဲ့Billyကတော့ ​ဒီနေ့မှာလည်း ညီအစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်စရာပုံလေးတွေကိုတင်လာခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း Billyတို့ညီအစ်မနှစ်ယောက်ကိုချစ်ရင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
” ခ်စ္ရတဲ့ညီမငယ္ေလးအတြက္ ဘဝမွာတန္ဖိုးရွိၿပီးဆင္ျခင္လိုက္နာရမယ့္ အသိတရားေတြကို ေျပာျပသင္ၾကားခဲ့တဲ့ ဘီလီလမင္းေအး”
ခ်စ္ရတဲ့ညီမေလးေရ Billy Su Than Tharညီမေလးအတြက္ မဖူးစာေရးလိုက္ပါတယ္။
၁. အၿမဲတမ္းကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိပါ။
၂. ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တန္ဖိုးထားပါ။
၃. ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္ပါ။
၄. ဘာနဲ႔မွဘာအေၾကာင္းနဲ႔မွ ဘယ္သူနဲ႔မွမႏႈိင္းယွဥ္ပါနဲ႔။
၆. ကိုယ့္Style နဲ႔ကိုယ္ေနပါ။
၁၁. မေကာင္းတာေတြခ်ည္းေျပာတတ္တဲ့ Negative သမားေတြနဲ႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေဝးေဝးေနပါေနာ္။
ခ်စ္တဲ့ ❤️မဖူး”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ သူမညီမေလးကို သြန္သင္တဲ့စာေလးကို တင္လာခဲ့တာပါ။
အၿမဲခ်စ္ရတဲ့ညီမေလးနဲ႔ ပုံေလးေတြအၿမဲတင္တတ္တဲ့Billyကေတာ့ ​ဒီေန႔မွာလည္း ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ခ်စ္စရာပုံေလးေတြကိုတင္လာခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္း Billyတို႔ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ကိုခ်စ္ရင္မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
Previous post Hyun Bin နဲ့ Son Ye Jin တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလက်ဆောင်တွေကြောင့် အံ့သြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောလာတဲ့ ရက်ပ်ပါ Hanhae
Next post ” မိုးရေထဲမှာလည်း ဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်အောင် ကြိုးစားသရုပ်ဖော်နေတဲ့ ရှူတင်ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်တွေကို တင်လာတဲ့ချမ်းမင်းရဲထွ​ဋ်”